Dhinacyada Liibiya oo galabta heshiis saxiixay - BBC Somali
Dhinacyada Liibiya oo galabta heshiis saxiixay
Wufuudda Liibiya ee ka qeyb qaatay wada hadalka siyaasadeed ee Qaramada Midoobay ay soo qabanqaabisay ayaa saxiixeen heshiis lagu soo afjarayo dagaalka sannadaha badan socday laguna dhisayo dowlad wadaag ah ee midnimo qaran.
Saxiixan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Sukhayraat ee dalka Marooko, halkaasi oo tan iyo sanadkii la soo dhaafay ay ka dhacayeen inta badan wada-xaajoodyada dhex marayay wakiillada labada baarlamaan ee Liibiya ee iska soo horjeeday.
Heshiiska ay taageerayso Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in uu sii socdo inkastoo ay jirto diidmo ka imanaysa hoggaamiyeyaasha hay’adaha sharci-dejinta Liibiya ee iska soo horjeeda.
Waxa ay diideen in ay qabtaan cod ay si rasmi ah heshiiska ugu oggolaanayaan ama ku diidayaan.
Kuwa diidan saxiixa heshiiska ayaa waxa ay ku kala qaybsan yihiin wasiirrada dowladda wadaagga ah ee la qorsheynayo, iyo sidoo kale faafaahinta heshiiska ee ku aadan hoggaanka milateriga.
Liibiya ayaa inta badan waxaa maamula maleeshiyaad uu loolan ka dhaxeeyo kuwaasi oo aanan ka qayb qaadan wadaxaajoodyada. Lamana oga halka saldhigga u noqon doonta dowladda cusub ee la dhisayo.